ताइवानमाथि अमेरिका र चीनको खतरनाक जुवा - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका २८ असोज २०७८, 7:58 pm
ताइवानका लागि अमेरिका यु’द्धमा होमिएला? यो प्रश्न दशकौँसम्म अमूर्त थियो। तर, अहिले यो प्रश्न अति आवश्यक बन्न पुगेको छ।
चीन र अमेरिका दुवै मुलुकमा आम जनताको मुडले नेताहरुको निर्णयलाई प्रभावित तुल्याउँछ। तर, दुवै मुलुकमा जनताको धारणा झनझन् उग्र र लडाकु बन्दै गएको देखिन्छ। चिनियाँ जनतामा राष्ट्रवादी भावना उचाइमा छ र उनीहरुको ध्यान अमेरिकामा केन्द्रित देखिन्छ। यो कुरा हालै रिलिज भएको ब्लकबस्टर फिल्म ‘द ब्याटल एट लेक चाङजिन’मा पनि प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ। फिल्ममा कोरिया यु’द्धमा चीनले अमेरिकालाई हराएको कथा छ।
अमेरिकामा अहिले ६७ प्रतिशत मानिस चीनप्रति नकारात्मक धारणा राख्छन्। २०१८ मा सो अनुपात ४६ प्रतिशत मात्र थियो। अगस्ट महिनामा गरिएको अर्को सर्वेक्षणमा यदि चीनले ताइवानमा आक्रमण गर्यो भने अमेरिकाले आफ्नो सेना खटाएर सो टापुको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकीहरुको संख्या आधाभन्दा बढी (५२ प्रतिशत) पुगेको छ। ताइवान यु’द्धले तेस्रो विश्वयु’द्ध निम्त्याउने खतरालाई नियाल्ने हो भने यो सर्वेक्षणको नतिजा आश्चर्यजनक छ।
त्यसलाई रोक्न अमेरिका यु’द्धमा जाला त? यसको छोटो उत्तर हो– वास्तवमा कसैलाई थाहा छैन। ताइवान यु’द्धको विषयमा विस्तृत योजना तयार पार्ने जिम्मेवारी बोकेका वासिङ्टन र बेइजिङका सैन्य योजनाकारलाई पनि यसको जवाफ थाहा छैन। सम्भवतः अमेरिकाका ‘कमान्डर इन चिफ’ जो बाइडेनलाई नै थाहा नहोला। धेरै कुरा त आक्रमणको प्रकृति र त्यो समयको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा भर पर्नेछ।
यु’द्ध र शान्तिका विषयमा विश्व हल्लाउने निर्णयहरु प्रायः तीव्र गतिमा बदलिँदो परिस्थितिको माझमा अचम्मैलाग्दो गरी आकस्मिक र अव्यवस्थित तरिकाले लिने गरिन्छ। यो कुरा १९६२ को क्युबा क्षेप्यास्त्र संकट र १९१४ को युरोपको जुलाई संकटले पनि देखाइसकेको छ।
गतसाता बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभानले अफगानिस्तानलाई हेरेर अन्य मुलुकले अमेरिकाको संकल्प कमजोर बन्दैछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गम्भीर गल्ती हुने बताए। सलिभानको टिप्पणीमा अमेरिका ताइवानलाई बचाउन यु’द्धमा होमिन सक्ने सम्भावनालाई शक्तिशाली हुँदै गएको चीनले नकार्ला भन्ने चिन्ता देखिन्छ। अमेरिकी सेनाले गरेको यु’द्ध अभ्यासमा ताइवानमाथिको यु’द्धमा चीन विजयी बन्ने रिपोर्टको ख्याल बेइजिङले निश्चय नै गरेकै होला।
ताइवानमा हस्तक्षेपका लागि जनसमर्थन जुटाउन अमेरिकालाई त्यतिबेला झन् कठिन हुनसक्छ, जतिबेला चीनले सिधा आक्रमण नगरी छद्म तरिका अवलम्बन गर्न थाल्छ। प्रत्यक्ष यु’द्ध घोषणा नगरी चीनले ताइवानमा समुद्री नाकाबन्दी गर्न सक्छ, विशेष फौज पठाएर ताइवानको पूर्वाधार नष्ट गर्न सक्छ, वा ताइवानको नेतृत्व कब्जामा लिन सक्छ।
चीन र अमेरिका दुवैलाई यतिबेला के महसुस हुँदै गएको छ भने दुवै मुलुक एकअर्काविरुद्ध खतरनाक जुवा खेलिरहेका छन्। अर्को पक्षलाई पछि हट्न बाध्य पार्ने उदेश्यले उनीहरु आफ्नो हात बलियो रहेको देखाइरहेका छन्। रणनीतिक अस्पष्टताले दशकौँसम्म शान्ति कायम गर्यो। तर, स्पष्टताको खतरनाक क्षण सायद नजिकिँदै छ। (फाइनान्सियल टाइम्सबाट)